Indlu yamapuli EVULEKILEYO neyisebenzayo embindini weHouma - I-Airbnb
Indlu yamapuli EVULEKILEYO neyisebenzayo embindini weHouma
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguElise
Ikhalenda ICHANILE. Ngelishwa, andinakukwazi ukuqeshisa ixesha elide ngenxa yokubhukisha okuphakathi kuka-2022. Siseduze ne-Houma Civic Center. Sinendawo yabucala-indawo efanelekileyo yeholide yesibini okanye uhambo lomsebenzi! Le ndawo ikwayindawo yokuqubha engasetyenziswa nangabanye abantu kunye nepuli. Indlu esemaphandleni eyi-322 sq.ft iquka iWifi, igumbi lokuhlambela elipheleleyo nekhitshi elincinci. Yonwabela iveranda yezityalo, usele iglasi yewayini, okanye uphole nje uze uphole. Le ndlu isemaphandleni ilungiswe kakuhle likhaya lakho elikude nekhaya ngoxa ukwi-bayou!
Ikofu neti ziza kunikezelwa kunye namanzi abandayo kunye neziselo ezimbalwa ezithambileyo okanye ijusi egcinwe efrijini.
Icala ngalinye lebhedi liquka iplagi yokubhatalela iselfowuni yakho.
IPULI ijongwa njengendawo esetyenziswa nangabanye abantu... kodwa ke, sizama ukuvumela ukuba izinto zihlale ziyimfihlo kangangoko kunokwenzeka .
Iipati zepuli ezisemva kwendlu, Iipati zosapho, iipati zosuku lokuzalwa, iipati ezenziwe ngamaplanga, Imitshato okanye iindawo
I-TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Amazon Prime Video, I-Netflix
4.93 · Izimvo eziyi-120
Sihlala kwindawo ekhuselekileyo ekwindawo ephakathi eHouma.
Iyadi yam ngasemva ifana neyadi yaseNew Orleans. Ndinemithi ye-okhi ngaphambili kunye nemithi ye-cypress ngasemva. Kukho iintaka ezininzi ezintle ezihambahambayo imini yonke.
Kukho i-bayou epholileyo kwisitrato esinye esinokusetyenziselwa ukuhamba ngephenyane nokuloba. Kukho iidada namadada amaninzi malunga neebloko eziyi-2 ukusuka apha kumjelo omncinci. Kukho nenkundla yentenetya kawonke-wonke, ilayibrari, kunye nepaki ekufutshane... kunye nebhola yekhephu kukukhwela ibhayisekile ngokukhawuleza!!!
Sihlala kule ndlu phambi kwendlu esemaphandleni. Siye saba ngabahlali apha ubomi bethu obuninzi, ngoko nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na inkcazelo okanye amacebiso. Siza kukuvuyela ukukunceda :-)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Houma